सप्तरीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा : कति मतदानस्थल संवेदनशील ? - Ratopati
सप्तरीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा : कति मतदानस्थल संवेदनशील ?
सप्तरी, २७ जेठ – आउँदो असार १४ हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यस जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले अहिले निर्वाचन सहज रुपमा गर्न र कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाएको जनाएको छ ।
सुरक्षाका लागि जिल्लाका विभिन्न चोक तथा बजारमा नेपाल प्रहरी तथा म्यादी प्रहरीलाई २४ सै घन्टा तैनाथ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक एवम् प्रमुख अनुराग द्विवेदीले बताए ।
जिल्लामा सुरक्षाका लागि २४ औँ घन्टा प्रहरीले जाँच र निगरानी गरिरहेको छ भने प्रहरीको मोबाइल गस्तीसमेत परिचालन गरिएको छ । यस्तै, इलाका प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी चौकीमा थप जनशक्ति परिचालन समेत गरिएको छ ।
निर्वाचनबारे प्रतिक्रिया दिँदै राजपा सप्तरी जिल्ला संयोजक सुनिल झाले आफूहरुले उठाएको माग पूरा नभएसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गरे ।